नेकपामा नयाँ वैचारिक बहस - Samajik Patra
हामी कुन युगमा छौं
अहिलेको युग कुन युग हो भनेर परिभाषित गर्नु अघि अहिलेको युगका विशेषताहरुबारे चर्चा गरौं
४. कस्तो समाजवाद ? जेरेमी रिफ्किनले भने जस्तो सहयोगी समाजले त्यसको पूर्ति गर्ने हो ? थोमस पिकेटीले भने जस्तो सहयोगी समाजवाद हो ? नोम चोम्स्कीले भने जस्तो उदार समाजवाद हो ? लासालले भने जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो ? मार्क्स-एंगेल्सले व्याख्या गरेको वैज्ञानिक समाजवाद हो ? मार्ता हार्नेकरले लेखेको एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद हो ? वा चिनियाँ विशेषताकोे समाजावाद जस्तो हो ? समाज, विषय र आवश्यकता नयाँ ठाँउमा छ तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बहस पुरानै ठाँउमा छ । हिजोका सूत्रहरुद्धारा आजका समस्याहरुको समाधान संभव छैन । आजका समस्याहरुको समाधानको लागि वैचारिक बहसको थालनी ढिलो भइसकेको छ । सबैको ध्यान यतातिर जानु पर्छ कि
कुप्रचार अभियान चलाउनेहरू एमसीसी पारित गराउन लागिपरेका दलालहरू हुन् : भीम रावल
बुधवार, भाद्र २४ २०७७०७:५५:३८
रामदीप आचार्य नेकपा
आउनुहोस्- ओलीविरुद्ध संयुक्त मोर्चा कसौँ !